Katz on Dogs: Jon Katz : Luhla lwekubuka prespective abanikazi bezinja
Igcine ukubuyekezwa: May. 18 2018 | 7 imiz ufunde
* Thola inja ufuna.
Ukuhlukunyezwa of izilwane jikelele, nezinja ikakhulukazi, ine inkatho kwaholela abanikazi ekuqinisekeni ukuthi option zokuziphatha kuphela ukusindisa a inja kwamagremu, lapho ibhekene ukubulawa kwesiguli. Kungaba yinto enhle ukutakula inja (yophula border collie yami Orson elele phansi edeskini lami), kodwa, like inja ubunikazi uqobo, ngeke everybody. Kungaba yinto enhle ukuthola inja enkulu evela umfuyi omuhle. I ababili labo, kanjalo: one nezinkomo nezimvu uyagijima epulazini yami, futhi entsha, Clem, suffuses ekhaya lami nokuphila nabangane sweet. I smile cishe sonke isikhathi ngibheka wakhe. Akekho phoqa onjani inja wena kufanele uthole, Ngokuqinisekile ngeke I. Ufanele awuthwale, ukuze uthole omunye ukuthi cishe ukuthanda.
Kodwa wenze umsebenzi wakho wesikole. Ngisho kusengaphambili, kusalokhu into a crapshoot. Dogs wathenga isilwane ezitolo cishe bavela puppy Izigayo high-volume zizalela imisebenzi lapho inbreeding kudala futhi luqhuba impilo kanye Ubumnene izinkinga. Ngokocwaningo olwenziwa ekhonjiwe by umhleli James Serpell and uzakwabo J. A. Jagoe in The Dog Domestic, izinja etholakala isilwane ezitolo Ulakho kakhulu ukuba abonise ukwesaba social and emakomidini-hlobo ulaka kuka izinja ezivela abalimi noma zokukhosela. Khulula nendawo yokukhosela izinja eziningi nezinkinga zokuziphatha, kungephutha eyabo. Babé kabi, abahlukumezekile, noma ngokuphindelela kabusha homed, kangangokuthi, ngokusho University of Pennsylvania School of Medicine Veterinary, siphelela more cishe kakhulu ukuba nezinkinga like ukuhlafuna abayimilutha, uchuku, Barking, ukudla, futhi lokho abantu call “separation izinkathazo,” kuka purebreds kusuka izinga abalimi.
Amaqembu khulula Responsible kanye nezisebenzi yokukhosela hhayi nje bavume lokhu kodwa Abokuqala bayayivisisa it, ukuze izinja musa bounce back noma, zimbi, kabi noma zilimaze abanye. Kodwa engihlangabezane nazo ezinye izisebenzi zokutakula suffused nge passion for nokuzinikela izinja oswele abazimisele kakhulu ukuhambisa izinja enobudlova noma elinezinkathazo emizini kuqhakanjiswe. Futhi ngisho izinja abalimi kanembeza kusukela ibunjwa konina kanti nezingane zakubo, ukuze abanye zilimele, esabekayo, futhi cowering, kanti abanye bafunde ukuba ngizizwe ngilondekile futhi bathembane. Inala abalimi abonakele, noma abahahayo ngobuningi izinja ngezizathu yezimonyo noma commercial, ngaphandle mayelana umlando wezempilo noma ubuntu. Kusukela yonke inja cishe ngokuphelele unmonitored futhi angahlelekile by sikhungathekile, ohulumeni basekhaya ezanele, Abantu abafuna izinja ngempela bebodwa. Yingakho kuwumqondo omuhle ukubuza abalimi kanye namaqembu khulula for amareferensi, ukuze ungakwazi ukubona ukuthi abanye izinja zabo ziye zasebenza out.
Akuve oyingozi ukwenza inja Ukukhetha isenzo sokuziphatha noma ezombusazwe. Yazi ukuthi uma ukhetha inja khulula, noma kungase kudingeke ukubekezela letitsite skill. Izinja abaningi bangaqeqeshwa noma retrained, ngisho emazingeni abadala, kodwa uma ungumuntu engathandi noma ukwenza ukuzinikela ongaguquguquki isikhathi kanye nomsebenzi, a ohlukile inja ingase ezikufanelayo kangcono. Ukuthola inja purebred uma kukhona izinja eziningi kangaka abaswele zokukhosela namanje, emqodweni wami, a option sinembile, futhi ngezinye izikhathi lowo kangcono.
* Kuthatheka kwemizwelo kuhambisana isitha sakho esikhulu lapho kuziwa beletha inja emzini wakho.
Thatha isikhathi sakho. Musa isinqumo inja ngoba wabona omunye uthanda on a show TV noma uhamba ngomgwaqo. Noma kusimangaze izingane zakho, noma abazali bakho elingenalutho yokwakha isidleke, noma ngoba nezwa uhlobo kuba smart. Border collies kukhona smart, kodwa benza izinto izinto stupid, like uzama ngelusa udoti amaloli. A smart Inja akuyona pet enkulu, noma kunjalo. Ngangineminyaka neither bayabukana sengathi bafuna ukuhleka noma yefilosofi lapho Orson esiphethweni kanjani ukuvula esiqandisini futhi isuse inkukhu yonke.
* Ukwehlisa okulindele.
The namazinyane azo edlala otshanini zikhangisi inja ukudla mihle, kodwa bengavumelani wena uyobe ibe inja real. Puppies Real izingozi phakathi nokuqeqeshwa mayelana nokugqekezwa, iphutha amatshe for utshani, ukuhlafuna izinto ulazisa. Izinja Real Roll in inyamazane scat bese hop phezu kombhede waphangalala. Badinga isibhamu kanye imithi; begula.
Dogs Real kungenzeka liwuthole esiningi ithuba beboshiwe eceleni kwakho enqamula epaki. Ngenxa yokuthi izinja abaningi kangaka kabi abaqeqeshiwe, benza abathandi non inja ngokuya ngingakhululeki. Amaphoyisa lonke izwe bhala amathikithi abantu abahamba nezinja lakhipha. Abanikazi Dog get uboshwe izilwane’ Ukulunywa, ngisho ukuziphatha esongelayo. Izinkampani zemishuwalense ngokuya uhlole ukuze ubone yiziphi zohlobo inja une, futhi ukukhansela izinqubomgomo uma awumuhle. Amanye amaqembu animal-amalungelo akholelwa izinja kumele ithathwe okukhulu kwezomthetho, bucishe bulingane nabantu '. Abanye ningakholwa abantu kufanele bavunyelwe ukuba “siqu” a inja ngaso sonke. Kodwa Theory Rational of Dog Training ugcizelela yemfanelo ubunikazi.
* Futhi lezi imithwalo kungabonakala wenkuthalo.
Dogs kudingeka aphume ngisho nalapho ukuthi ethela umnkantsha. Abadingi ukunakwa, lomzwelo, stimulation, nokuvivinya umzimba, ngisho nalapho ukhathele, umatasa, noma cha in the mood. Izidingo zabo musa ukubohla uma ufuna impelasonto off noma uma ukuhlala isikhathi ehhovisi.
Ukusebenza abathandi inja balindele lezi zinkinga futhi ziyithola nabo amahlaya ukubekezela. In ukubuya, bayaba uthando okuningi, fun, futhi ubungane. Zikhona izingxabano nemivuzo ibuphi ubuhlobo, human noma Canine. Ngikholelwa ukuthatha umbono eside uma kuziwa izinja. Udinga ukubona ngalé kwesikhathi samanje, ikakhulukazi uma kukhona phansi ezintathu A.M. dabbing at the umata kanye Nature 's Miracle, ezama ukususa iphunga. Umbono osekukudala uza kuphela azi nesimo salezi zilwane, nokwamukela ukuthi ngisho ngomzamo omkhulu ngeke njalo Mesh nokwethu.
* Qaphela izaba ukuhlukunyezwa.
Just a eyishumi edlule, izinja zazisekhona “yokutholwa,” hhayi “yophula,” i mqondo ngisho nangokwengeziwe ngokomzwelo icala. Ngini inja abanikazi kuka Ngingathembela manje ukwethula noma uchaze izinja zabo kanye ibinzana: “Wayephinde cishe bahlukunyezwe.”Lapho ngimbuza kanjani bazi, ngokuvamile ubufakazi bezimo, at best.
Qaphela uma isifiso ukusindisa inja ekuhlukunyezweni isizathu esiyinhloko ufuna eyodwa. Ziningi izindlela ukuveza esintwini nobubele, abantu noma izilwane, kodwa lokhu isilwane ethile ekhaya lakho. Uma siqonde izinhloso zakho siqu noma ukucabanga eyiphutha, kokubili uzobe babhekene nemiphumela iminyaka.
Steven R. Lindsay, in isidoda sayo yemiqulu emibili ye-Handbook of Applied Dog Behavior and Training, ihlola ekucabangeleni ezenziwe mayelana nokuhlukunyezwa in the yokufuna izinja. Ukwesaba kwabantu kanye nezinye ukuziphatha nokugwema ngezinye izikhathi zibangelwa kabi owedlule, Lindsay iyavuma. Kodwa abasebenzi yokukhosela ziyashesha basebenzise lelo ncazelo lapho ukukhuluma Abokuqala abazoba, ngaphandle kokwazi ukuthi kuyiqiniso. “Akungabazeki, ukuhlukumeza ngokomzimba nangokomzwelo kwenzeka futhi angase abe imbangela esiphawulekayo ukwesaba,” Lindsay ubhala. “Nokho, kungenzeka kwenzeka ngokuvamile kude esingaphansi ongakulindela kusukela imvamisa of imibiko enjalo.”
Njengoba izinja asilungise, noma akhononde ngabazali babo, Kulula ukucabanga ukuthi siphelela izisulu zonya womuntu, umqondo futhi ngokuvamile kuyavumelana siqu nezidingo zethu ezingokomzwelo nezingokomoya imilando. Kodwa zofuzo, inbreeding, futhi izimo udoti, phakathi nezinye izici, kungaba futhi ogxile balolonge inja. Isikhathi esiningi, asisoze sazi ngempela ngokoqobo angase ayigculisi kuka a fantasy khulula. Ungathanda ukuthanda le nja okuningi uma wayazi ukuthi wayesaba ngoba wayekhanga insufficiently ingevu njengoba puppy?
* Ukungabaza wena silindele abakwethembi in the abantu ubhekene ukuthola inja.
Abalimi Good and kanembeza khulula nendawo yokuhlala abasebenzi kuyoba wangabaza ufisa senja, ngisho kuze kube seqophelweni obnoxiousness. Bazophatheka ukubuza isimiso sakho, egcekeni, kocingo, izingane, Inja-enamaphiko isipiliyoni futhi kufanele. Empeleni, uma ungaphenduki, thatha it njengoba kuyisixwayiso sokuthi ungase ufuna inja endaweni engafanele. Ngakho abantu abaningi bazi okuncane kakhulu ngezinye izinja uma they zuza one noma ngalezi namathemba angenaso isisekelo esizwakalayo izigidi izinja kabi, wabuyela, noma ishiywe unyaka ngamunye. Abantu abasakaza nabo baye basibona a lot, ngezinye izikhathi kakhulu. Awufuni inja kothile uyakulangazelela ukunikeza noma ukuthengisa you one ngaphandle kokubuza imibuzo ezinye ezinzima.
* Yazi wena.
Abantu bavame ukusola izinja lapho kuphakama izinkinga, kodwa cishe njalo iphutha lethu. Kuphakathi kwalokho sathatha isiqunto oyisimungulu (ngokuletha a huskie to a Condo in Boca Raton), noma singazi ngempela isikhathi nobuntu zokuqeqesha inja, noma sathatha isiphephelo fantasies. Kungacishe kwenzeke, ubhekene ukuthola inja wena ngoba udinga noma ufuna into ukuthanda, noma enye into ukuthanda, noma ngenxa ungathanda ukuba ithathe isikhundla izinto omthandayo ukuthi kukhona gone. Akukho lutho olungalungile noma ekhathaza ngalokho, kodwa inja akukho isevisi cindezela noma ukuphika it by sokugcizelela, “Ngathola inja for the kids” noma “Ngisanda it ukugcina amasela away.”
Futhi ingabe leyo isifiso sokuthanda zinkulu ezinye izici? Ingabe uyabekezela? Ingabe unayo ukubekezelelana eliphezulu lomsindo, disorder, futhi ukuxokozela? Ingabe umklomelo ngomata ehlanzekile futhi ifenisha? Noma elele late ngamaSonto? Ingabe ethukuthela kalula? Ukuthola inja enkulu, eqolo, esishintsha ukuphila isinqumo esithinta iminyaka.
* Dogs akuzona womuntu, khumbula. Abazi bacabanga ngamagama womuntu noma ngokwemibandela.
Abakwazi Baxoxa, ukulandela ukulandisa, funda izingqondo zethu (nakuba uyezwa uhlale yethu). Ababona “Izingane nge fur,” noma izingane wonke. Singase sithande ukuba ukufa, kodwa lokho akusho ukuthi ufana nathi. Empeleni, Abanikazi iningi inja siyabathanda ngoba uqamba singafani us. Ukuze wayiziba dogness kwabo senze zombili izinhlobo. Ukuze ukhohlwe ukuthi kukhona izilwane, kulawulwa kakhulu izifiso okungokwemvelo for nomunye futhi ukudla, sex, nokunaka, kuba ukushintsha ngokoqobo natures zabo, futhi engozini.
* Dogs akuzona abelaphi, noma.
Ubuhlobo bakho inja ngeke cishe bahlukunyezwe futhi khuphela umlando wakho siqu umndeni kanye esidlule ngokomzwelo, kodwa ikhono inja okwelapha usizi ubudala noma ugcwalise voids lilinganiselwe. Abantu uzokutshela ukuthi izinja zabo baqonde imicabango yabo ejulile wazi izimfihlo zabo ejulile, kodwa musa yokulahla ezimpahla yakho ngokomzwelo on isilwane. Uma udinga usizo nezinkinga, ezinkulu noma ezincane, yithole. Uma inja yakho nokuqonda kangcono kunokuba umyeni wakho noma umkakho, ukunikeza inja ithambo, ke hamba ubone umeluleki wemishado, noma okungenani kakhulu abe izingxoxo nomngane wakho womshado. Ungabuzi inja yakho ujabule noma ukwelapha ukudangala yakho. Imicabango inja yakho cishe zigxila lapho uya uthole off Butt yakho nimuphe.
* Dogs ngokuya ngimbone njengoba imimoya sagacious nemiphefumulo prescient.
The Theory Rational akusho ukuthenga it. Silula ubuhlobo bakho a inja, ngcono, ngoba izinja ilula. Bathanda imithetho, isimiso nokucacisa, ubuholi, iphunga othakazelisayo, nezinye izinja, futhi, kunjalo, ukudla kanye abantu abanikeza yona. Elinye lamatshe of the Theory Rational: Inja yakho crazy ngawe, kodwa angakwazi futhi sifunde ukuthanda cishe ubani omunye ephethe hamburger.
* A nesisekelo esiqinile sezindinganiso mqondo of approach to my abaphila izinja ukuthi kudingeka babhekane namaqiniso, nezimo, futhi creative, nzima phezu kwabantu kodwa lula izinja.
Lindela a lot of wena mayelana ukubekezela, Ukuzimisela, bomsebenzi. Njengoba wena, inja ngeke ufane. Zama ukucabanga mayelana “okuhle” futhi “bad” izinja. Lezi imibono human ukuthi azisebenzi izilwane. Bangu, esikhundleni, izinja baqonde indlela abahlala emhlabeni nezinja ukuthi bengayi. Ngezikhathi ezithile, Izinja zizalwa abanobudlova, genetically kabana, noma uphathwa kabi yokulungisa. Ngokujabulisayo, bayazivikela ezingavamile.